जानने Siderodromophobia | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > जानने Siderodromophobia
पढ्ने समय:3मिनेट(Last Updated On: 29/03/2020)
यात्रा केही लागि चिकित्सकीय हुन सक्छ; while the same could lead toalot of phobias for others. People who like traveling will probably even looking at their रेल सीट बुकिंग को यात्रा को लागि र तिनीहरूले यात्रा सुनिश्चित.
Siderodromophobia के हो?
यात्रुहरू को सबै भन्दा आफ्नो रेल सीट बुकिंग लागि अनलाइन हेर्न; जबकि अन्य प्रवाह संग बस जाँदै रुचि र हुनेछ आफ्नो रेल सीट बुकिंग रूपमा गरेको र कहिले आवश्यक जहाँ तिनीहरूले अर्को जाँदैछन् आधारमा. त्यहाँ केही मानिसहरू ग्रस्त पनि गाडिहरु सम्बन्धित phobias छन्. रेल को डर Siderodromophobia रूपमा जानिन्छ. Siderodromophobia रेल सम्बन्धित सबै डर वा phobias समेट्छ कि एक धेरै व्यापक शब्द छ. मान्छे को मुख्य प्रकार यो phobia मुख्य रूप समेट्छ कि मान्छे को छ कि डर छ दुर्घटनाग्रस्त रही वा नियन्त्रणमा रहेको छैन. यो भन्दा अन्य, त्यहाँ जब मानिसहरू रेल छन् ट्रिगर प्राप्त अन्य डर हो. त्यहाँ रोगाणु phobia कि डर हुनेछ, सामाजिक phobia वा claustrophobia.
Siderodromophobia विभिन्न phobias मा आधारित छ. थप, अवस्था छ कसरी गंभीर आधारमा. हृदय छिटो धडकन जस्तै लक्षण हुन सक्छ त्यहाँ, डराएको, shaking or gastrointestinal symptoms. केही मानिसहरू लागि, अवस्थाको अगाडि पनि लामो सुरु हुन सक्छ रेल यात्रा सुरु. यो मुख्य रूप हामी anticipatory फिक्री थाहा के संग गर्नुहुन्छ. Anticipatory फिक्री वास्तविक phobia नै भन्दा पनि बदतर समस्या हुन सक्छ. भय लागि कारणहरू व्यक्ति सामना छ कि नकारात्मक अनुभव सम्बन्धित छन् अधिकांश समय, जो कतै रेल सम्बन्धित छ. त्यहाँ नकारात्मक कि यहाँ बुझ्न आवश्यक छ अनुभव कि आवश्यक तपाईंलाई भएको छ भन्ने कुरा हुन छैन आफ्नो मन जोडिएको छ. यो पनि हामी व्यक्तिमा वा कि त हामीलाई वरिपरि देखेको छु सक्ने अर्को व्यक्ति वा केही भयो सक्थे भन्ने कुरा हुन सक्छ मिडिया.
दिनको अन्त्यमा, यो डर अवस्थित छ छैन महत्त्वपूर्ण; के तिमीले भय सामना र प्रयासमा बनाउन कसरी आफ्नो जीवनमा ठाउँ बनाएको छ कि डर उन्मुक्ति छ. सबै phobias को, Siderodromophobia वा रेल phobia धेरै सजिलै उपचार योग्य छ र उत्कृष्ट सफलता दर देखाएको छ, उपचार गर्दा. को phobia छुटकारा प्राप्त गर्न, पहिले रेल रूपमा टाढा कुनै पनि नकारात्मक विचार को छुटकारा रही काम भने सेवन गर्नुपर्छ कि कदम चिन्तित हुनुहुन्छ. पनि, को phobia संग व्यक्तिगत उनको व्यवहार परिवर्तन काम गर्न आवश्यक हुनेछ रेल सम्बन्धित. टिकाऊ छ र उचित हेरविचार र उपचार मार्फत निश्चित गर्न सकिन्छ कि दिन आफ्नो कुरा को अन्त मा.
Leave your fear behind and अर्डर बचत एक ट्रेन बाट टिकट गाडिहरु
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/knowing-siderodromophobia/ - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#siderodromophobia रेल ट्रेन यात्रा सल्लाह travelfear